နှစ်သစ် အကြံအစည်အသစ် FBSနှင့်အတူ အိပ်မက်အသစ်တွေကို - အခုပဲ ဝေမျှလိုက်ပါ!
ချစ်မိတ်ဆွေများခင်ဗျား, ယခုကဲ့သို့ ၂၀၁၈နှစ်သစ်အချိန်အခါကို အားလုံးနှင့်အတူတကွ စတင်ဖြတ်သန်းခွင့်ရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အနေနှင့် အလွန်တရာမှ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်. သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနှင့်. ကမ္ဘာလောကကြီးက ပျော်ရွှင်စရာတွေ အံ့အားသင့်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်ကို တကယ် ကြည်နူးပျော်ရွှင်စေမယ့်အရာကိုသာ ဆန္ဒပြုတောင်းဆိုလိုက်ပါ. စိတ်ကူးအဆန်းသစ်ဆုံး အထူးခြားဆုံးဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်များကိုရေးသားပြီး ကံထူးရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါ!
• FBS အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ
• သင့်ရဲ့ ပါစင်နယ်ဧရိယာရှိ ပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာကိုသွားရောက်လိုက်ပါ
• ကျေးဇူးပြု၍, သင့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပြောပြပါ. သင့်ရဲ့အိပ်မက်က သင်အပြောကောင်းရင်ကောင်းသလောက် တကယ်ဖြစ်လာဖို့အခွင့်အရေးပိုများလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးကိုယ်တိုင်ကစိတ်ကူးအိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်လို့ ငွေကြေးအတွက်ဆန္ဒမပြုပါနဲ့.